I-Polisensornye SPA: sisebenzisa zonke iingqondo
I-polisensornye spa - enye yezona ndawo zifanelekileyo kwiinkampani zobuhle. Ngoku umsebenzi wejelo nganye nge-ukhilimu, i-gel okanye i-serum ayinakukwenza ukuba ube mnandi kakhulu, kodwa uzonwaba neengqondo. Ngethuba le nkqubo, ingaphakathi le-spa, ama-aromas nomculo okhethwe ukuba uphumule kwaye uphumule, okanye ngenye indlela, kuya kuphazamisa. Ingcali efanelekileyo, ngaphambi kokuba uqale iseshoni, ngokuqinisekileyo iya kuchaza oko kukukhethayo, njengamafutha afudumele okanye apholileyo, nokuba umculo uphazamisa ... Nangona kunjalo, kukholelwa ukuba ukuhambelana okulungileyo kunanoma yimuphi umgangatho we-spa utsha, kungekhona ama-aroma amnandi kunye nezandi zendalo .
Umqondo wokuqala: I-Rumor Ulwaphulo olusisigxina kwi-spa luyongezo olumnandi kwiinkqubo ezininzi. Ingxolo yesantya, ukubetha kweentaka okanye ukubethelwa kweentsimbi - ukhetho lwentetho lubanzi. Ngendlela, amaziko e-spa ahlala ebhala iingoma ezikhethekileyo zemimiselo yenkqubo yomncedisi wabo. Ukuthandwa kwidiski, njengomgaqo, kunokuthengwa ukuphulaphula ekhaya. Ngaphantsi kwakhe, ukunyamekelwa ekhaya ngokuqhelekileyo kumntu kuya kufumana amanqaku amasha.
Umlinganiselo wesi-2: Ukutya
Ngaba kunzima ukuzikhanyela ezincinci zokuzonwabisa? Zama ukukhohlisa i-taste buds. I-chocolate, i-vanilla, ukhilimu kunye neyeza zonyango zamagilebhisi azithethi ukuphulwa kokutya. Kodwa ukukhangela, ukuvumba kunye nokuthakazelisa ukuthungwa kwezinto ezimnandi kukuqinisekisa ukuvakalelwa kwemvakalelo kunye nokudala ukukhohlisa.
I-Vinotherapy mhlawumbi ngumzekelo obalaseleyo we-spa gourmet. Kwilizwe labo, eFransi, ezi zininzi iinkqubo zemihla ngemihla ezijoliswe ekunciphiseni ubunzima, ukuxilonga okanye ukulwa nokutshintsha kwexesha elidala. Nangona kunjalo, eMoscow unako ukuloba idiza, ucoce ngeoli yevini okanye uhlambe kunye nejusi elivuthiweyo. Nangona kutyelelo olulodwa kwi-spa enjalo lwanele ukuphakamisa ithoni ngokubanzi kwaye ulahlekelwe ukukhathala okuqokelelwayo. Ukugcina umphumo wezonyango zokusetyenziswa kwekhaya kunye neemveliso ezivuthiweyo ze-viticulture.
I-Chocolate e-spa yenza ulusu lube lula, luphephe kwaye lube lukhuni, izimonyo kunye nebhokisi ye-cocoa igubungela, inondla kwaye iyanciphisa isikhumba. Ukongezelela, kusebenza ngokubhekiselele kwi-cellulite self-massage. Ngokukodwa xa kuthethwa i-slim-gels nebhokisi ibhotela, i-caffeine kunye ne-algae.
Umqondo wesithathu: Umqondo wokuvumba
I-Aromatherapy i-oyile ibalulekile-enye yeendlela eziphambili ze-spa. Ngamanye amafutha abalulekileyo, ngaphezu kwendoda yayo ephilileyo, nayo ineetalente zokuzicoca. Ngokomzekelo, ioli yomthi we-tea ithambisa isikhumba esilumkileyo, i-roses-ikhusela ekuguga kwangaphambili, i-grapefruit ilwa ne-hyperpigmentation, i-lemon ihlaziye i-pores.
Yenza i-detoxification, isuse ukuvuvukala kwaye wenze ukuba le nto ilungele konke oku ngaphantsi kombane we-aromatherapy detox. Ubuncedo bayo bunzima kakhulu kwizinto eziphilayo kunye nenxalenye enkulu yezakhiwo ezifanelekileyo. I-Aromavanna yinto elula kunye ngokukhawuleza ye-spa ekhaya. Kodwa apha kukho imiba ethile.
Musa ukufaka iioli eziyimfuneko ngqo kumanzi. Qala udibanise kunye neoli-zityalo, ulwandle ityuwa, ubusi okanye ukhilimu. Ngoko baya kutshatyalaliswa ngokulinganayo baze bangatshisi isikhumba. Amafutha anokuxutyushwa. Kuhlamba olupheleleyo, ngokuqhelekileyo ngokwaneleyo amathandathu ayisibhozo. Emva kokumnandi ukucima ulusu ngelawula - ungasebenzisi ngokukhawuleza ukhilimu, ukuze kungabikho mpendulo.
I-Bath Cleopatra kunye neeprotheni zobisi kunye namafutha abalulekileyo aphucula kwaye anondla ulusu. IRoma iqinisa imvelaphi yeemvakalelo, idala uvakalelo lwentlalo noxolo.
Umqondo wesi-4: Umbono
Uninzi lwabantu lubhekisela kwiziboniso. Kubo, kwingcaciso ebonakalayo ebalulekileyo. Kwabo "bathanda amehlo," iinkqubo ze-spa zizalisekisa izinto ze-chromotherapy. Imigaqo yayo yaqulunqwa kwixesha la mandulo, kwaye isayensi yanamhlanje iqinisekisa ukucinga kweengcali zakudala zamaGrike. Umbala obomvu unyanisekile kwaye unike amandla, ukuluhlaza kuluhlaza, uluphuzi lunceda uxinaniso. Oku kusebenza ngokusemgangathweni kwizinto zangaphakathi, kunye nokukhanyisa, kunye nombala wokuthungwa kwemveliso yezonyango. Umzekelo, unokukhetha ukukhetha ukukhanya okufanelekileyo kwikhabhinethi, ukuhlambala ngamatye ayenemibala okanye emva kwe-spa, ulungise umboniso okhanyayo kwindawo yokuphumla, kwiitoni ezifanelekileyo zentliziyo yakho.
Umbala we-sauna ungumdla othakazelisayo wamaziko okuphila. Ukubukela ngokukhawuleza kwe-LED ezinemibala eyahlukahlukeneyo uya kuba sefudumala kwikhamera ye-infrared. Ukuze uphumule, ulungelelanise umsebenzi weengqungquthela ezihlambulukileyo kunye nokunciphisa ukuxhamla kwesikhumba, i-blue-violet shades iya kwenza.
Ngaba uziva uhlahlo? Khetha i-chromotherapy kwibanga elibomvu. Iseshoni sesure seyure isebenza ukuvuselelwa kweeseli, ukukhawuleza kwegazi kunye nokuhamba kwe-lymph.
Umqondo wesi-5: Thinta
Ngokwezibalo, i-70% yabemi base-megacities bavalelwa yindlala yokutya-ukungabi ncamango lweentlungu. Ukuzalisa ukusilela kwezinto ezintle, ukuchukumisa ukuphumla ngumsebenzi wee-spas ezikhethekileyo.
Iinguqu zabo ezicacileyo-ukuhamba kweenyawo ezinyawo, ukunakekelwa kweenwele ze-spa kunye ne-headage massage okanye i-cryosauna-kufuneka ibe neyintombazana yebhizinisi. Ukondla rhoqo i-endorphins emva kokuba iinkqubo ezinqanda ukubunjwa kwe-muscle clamps, igcina ithoni yekhanda kwaye iqinisekisa ukuba nomoya ohle.
Ukuxhamla kwangempela kubavoti bathembisa i-cryosauna ngeqondo lokushisa kwama-140 degrees. Ukutshatyalaliswa kwexesha elifutshane elidlulileyo akubangele ukuvakalelwa, kodwa iiseli zesikhumba zithola umqondiso wokukhawulezisa ukuvuselelwa. Isiphumo - ukuphuculwa kwetoni kunye ne-skin turgor, ukwandiswa kwe-immunity yendawo kunye nokuphuhliswa kwesahlulo esongezelelweyo se-hormone zenjabulo.
Ekhaya, sebenzisa ama-creams afudumele kunye neoli nge-ginger, pepper okanye udongwe lwe-volcanic. Bafanelekile ukucoca ulusu kunye nokuzihlaziya okuphumayo. Iigelesi ezihlaziyileyo nge-menthol, i-ingint, i-glacial kunye namanzi ashushu ayenomphumo onxamnye nomonakalo kunye nokunyusa isikhumba esikhuselekileyo.
Iseshoni kwi-cryosauna ithatha imizuzu embalwa nje. Ngeli thuba emzimbeni kukho utshintsho olubalulekileyo. Ukudambisa kunye ne-vasodilation esilandelayo kubangela ukuba i-microcirculation i-bloodcirculation engcono, iinkqubo ze-metabolic ziqheleke, ukukhuselwa komzimba kwangaphakathi kuyaqiniswa.
Inqaku le-6: Intuition
Ukuncipha, ukunganeliseki, ukhathala okwandayo ... Ezi zimpawu zinokuba nezikhulu zezinto ezihambelana nomoya okanye ngokomzimba. Ngaba impilo yakho ilungile? Emva koko, mhlawumbi, kufuneka uphulaphule umqondo wesithandathu. Kule ngxaki kuya kunceda i-spa, isebenze ngento efihlakeleyo njengamandla okuhamba.
I-Shirodhara - i-oil massage yesigaba seyesithathu, uthembisa ngaphezu kweziphumo ze-cosmetic (ukucola ubuso bomzimba kunye nokwanda kwesikhumba) ukufumana ukuvumelana kunye nehlabathi elijikelezayo.
Injongo yesinye isiqwenga samandla, i-Reiki's massage massage, ukuvula nokubuyisela amandla okugeleza ngendlela efanelekileyo yokuziqonda kwakho. Ngokwenza oko, oku kuthetha wena ihora lokuphumla ngokupheleleyo.
Ukunyamekela kweZilwanyana kunye namafutha omzimba
Indlela yokunika ulusu isikhumba segolide
Iinkqubo ze-Spa ekhaya, zokupheka
Ucwaningo lwezenhlalakahle - ukukhipha isisu eRussia
Ama-eggplants kwi-sauce enomnandi nelomuncu
AmaSandwich nge salmon kunye nokuhamba
I-Smoothies yemango kunye namajikijolo
Ngaba ndiyakhulelwa emva kokuya esikhathini?
Ikhekhe lePasika ngefronta
Izithethe zamasiko kunye namasiko
Casserole kunye neepatisson